Milicsiga Sidii Ay Warbaahinta Dunidu Wax Uga Qortay Socdaalkii Jendayi Frazer Ee Hargeysa | Berberatoday.com
Milicsiga Sidii Ay Warbaahinta Dunidu Wax Uga Qortay Socdaalkii Jendayi Frazer Ee Hargeysa
April 19, 2017 - Written by Berbera Today
Hargeysa(Berberatoday.com)-Markii uu Madaxweyne Rayaale ka soo noqday dalka Maraykanka islamarkaana socdaalo ku gaalaa bixiyay dalal Afrika ka tirsan, waxa Hargeysa si lama filaan ah socdaal ugu timid kaaliyihii xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka u qaabilsanayd Afrika Ms. Jendayi Frazer, ka dib markii ay xukuumadii Rayaale dalka ku martiqaaday.
Waxa ay xustay in Somaliland tahay maxmiyad Ingiriisku gumaysan jiray oo la midowday Somalidii Talyaanigu gumaysan jiray sannadkii 1960-kii, “Laakiin gobolkani waxa uu ka go’ay sannadkii 1991-kii ka dib markii la riday keli taliyihii Maxamed Siyaad Barre.” Ayay tidhi Wakaalada AFP, waxaanay intaas raacisay, “Wargeyska Washington post ayaa billihi ugu dambeeyay baahiyay in Maraykanku ka wada hadlayo xaaladda taageerada uu siin doono Jamhuuriyadda Somaliland oo ah dhul ka bad qaba wadanka ay ragaadiyeen dagaalada iyo kacdoonadu ee Somaliya. Laakiin saraakiil ka tirsan Wasaaradda Arrimaha dibadda ayaa ka soo horjeestay fikradda ka timid qaar ka mid ah saraakiisha Wasaaradda Gaashaandhiga, kuwaas oo sheegay in taageero dibadeed oo la siiyo Somaliland uu caawin doono degenaanshaha gobolka oo dhan.”
Wakaaladda AFP waxa ay intaas raacisay oo ay tidhi, “Gobolkan oo ay ku noolyihiin dad lagu qiyaasay 3.5 Milyan oo qof waxay samaysteen Distoor shaqaynaya tan iyo sannadkii 1997-kii, kaas oo afar sanno ka dibna la ansixiyay. Waxay samaysteen Madaxweyne iyaga ka yimid, dawlad, Baarlamaan, ciidan Boolis, lacag u gaar ah iyo xeerar gaar ah.”
Wakaaladda Wararka ee Reuters, ayaa iyaduna warbixin ka qortay socdaalkaas Jendayi Frazer. Warbixinta ay Reuters qortay waxa Hargeysa ka diray Xuseen Cali Nuur oo ah saxafi reer Somaliland ah, “Wafti miisaan weyn leh oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo ay hogaaminayso Diblomaasiga ugu sareeya maraykanka qaaradda afrika Mrs; Frazer ayaa maalinimadii axaddii la kulantay madaxda jamhuuriyadda Somaliland si ugala hadasho arrimo ay ka mid yihiin xaaladaha nabad gelyo ee gobolkan ay dagaaladu saameeyeen.” Ayay tidhi warbixinta Reuters ka diyaarisay socdaalkii Jendayi Frazer.
Wakaaladda Reuters waxa ay sheegtay in dadka Somaliland xoogga saareen nabadgelyada, taas oo waxyaabo badan hirgelisay, “Somaliland oo ku taala dhinaca gobolka woqooyi galbeed ee Somalia waxa ay gooni isku taageen 1991 wakhtigaasi oo ay dagaalo la galeen xukuumaddii kali taliska ahayd ee hogaamiye Maxamad Siyaad Barre.waxa ay ku guulaysteen inay dib u dhisaan wadanka iyaga oo nabad galyada awooda saaray taasi oo suurta galisay qabshada doorayooshin iyo hana qaad